About | Micro Film
Micro Film ၏အဓိပ္ပါယ်
Micro film ဆိုသည်မှာ Online တွင်ထုတ်လွှင့်သော၊ အချိန်တခဏလေးပေးရုံဖြင့် အားလပ်ချိန်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သောပြီး ဇာတ်လမ်းအပြည့်အစုံကို တစ်ခါတည်းကြည့်ရှုနိုင်သော ရုပ်ရှင်အသေးစား ဖြစ်သည်။
တင်ဆက်ရန်ကြာချိန်- ၃၀-၃၀၀ စက္ကန့် ။
ထုတ်လုပ်မှုကြာချိန် - ၁ရက်မှ၇ရက်အတွင်း (သို့) နှစ်ပတ်သုံးပတ် ။
ရင်းနှီးမှုပမာဏ - (ကန်ဒေါ်လာသုံးလေးရာမှ သုံးလေးထောင်အတွင်း) Video အတို။
ဇာတ်လမ်း - ဟာသများ၊ ခေတ်သစ်ဖက်ရှင်များ၊ ပညာဓါနများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာများကို အခြေခံပြီး တစ်ပုဒ်ချင်းဖြစ်စေ၊ စီးရီးလိုက်ဖြစ်စေ ဇာတ်လမ်းဖန်တီးနိုင်သည်။
ကွန်ပျူတာ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ Camera ၊ DV、DC、MP4 စသည်တို့ဖြင့် ရိုက်ကူးပြီး ထုတ်လွှင့်သော ဇာတ်လမ်းတိုဖြစ်သည်။
Micro Film ဖြစ်တည်လာပုံ
Micro film သည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၁၉၉၀ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလများ၌ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ မြေအောက်ခန်းများ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ ဘီယာဘားများ စသော နားနေရာများတွင် လွတ်လပ်စွာဖန်တီးပြီး လူနည်းစုများရှုစားနိုင်ရန် ပြသခဲ့သည်။ ယခုတွင် Micro film သည် ဇာတ်လမ်းတိုသက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲ Online Media များ၊ ရိုက်ကူးရေးနည်းပညာများတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ်မူတည်ပြီး Online တွင် လျင်မြန်စွာ ခေတ်စားလာသည်။
Micro film သည် IT ခေတ်တွင် တစ်ခေတ်ဆန်းစေသည်
IT ခေတ်၏ ရုပ်ရှင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အခေါ်အဝေါ်သည်လည်း တရုတ်ပြည်၏တမူထူးမှုကို ပေါ်လွင်စေသည်။ တိုတောင်းသော အချိန်၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့အပြင် သေးငယ်သော၊ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သောပုံစံများဖြင့် Social Media တစ်ခေတ်ဆန်းစေသည်။
Micro film အမျိုးအစားများ
ထိုအမျိုးအစား Micro film များမှာ လွန်ကဲသော ဟာသများနှင့် ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမူတည်ပြီး ဟာသများလွန်ကဲစွာ ရောနှောကာ ရိုးစင်းသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင် တင်ပြနိုင်သည်။ ထို့ပြင် နောက်ခံရှုခင်းရွေးချယ်ရာတွင်လည်း သာမန်ပြည်သူဘဝကို ပိုမိုထင်ဟပ်စေသည်။
ထိုအမျိုးအစား Micro film များမှာ အချစ်အကြောင်းကို သာယာလှပစွာ ဇာတ်လမ်းဆင်ထားသည်။
ငယ်ရွယ်နုနယ်သော သရုပ်ဆောင်များကို အသားပေးရိုက်ကူးကာ ပရိသတ်၏စိတ်ကိုဖမ်းစားသည်။ နောက်ခံအပြင်အဆင်တွင်လည်း ဂရုတစိုက်ပြင်ဆင်ကာ Romantic ဆန်ဆန် ပုံဖော်ပြီး အချစ်အကြောင်းကို အသားပေးထားသည်။
ဘဝကို ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်သူ ဇာတ်ကောင်ပုံစံ
ထိုအမျိုးအစား Micro film များမှာ ဘဝကို ကြိုးကြိုးစားစားဖြတ်သန်းသော လူငယ်ဇာတ်ကောင်ကို အသားပေးကာ ဇာတ်လမ်းဆင်ရိုက်ကူးသည်။
စစ်မှန်သော၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ဇာတ်လမ်းဖြင့် ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားသည်။
ထိုအမျိုးအစား Micro film များမှာ ရှေးခေတ် အဝတ်အစားများ၊ အပြင်အဆင်များကို နှစ်သက်သော ပရိသတ်များကို အထူးကျေနပ်နှစ်သက်မှုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
၅၂၈မေတ္တာဘွဲ့ မိဘနှင့်သားသမီးကြားမေတ္တာ (သို့) ဇနီးမောင်နှံကြားမေတ္တာကို ဇာတ်အိမ်တည်သည်။ လူတိုင်းတွင် သွေးသားတော်စပ်ချင်းနှင့်ဆိုင်သော ဖြစ်ရပ်များကြုံတွေ့ဖူးသဖြင့် ပရိသတ်နှင့် စိတ်ကူးတစ်ထပ်တည်းကျကာ ဇာတ်လမ်းကို ပိုမိုအောင်မြင်စေသည်။
နွေးထွေးသိမ်မွေ့မှုကို အခြေခံပြီး တစ်ဦးချင်းစီ၏ စကားလုံးများမှာလည်း မေတ္တာများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည်။
ထူးခြားချက်မှာ လှပသောရှုမျှော်ခင်းများနှင့် ပရိသတ်စိတ်ကို ဖမ်းစားထားသည်။
လှပသောရှုမျှော်ခင်းများနှင့် လူသားတို့၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဘဝပုံပြင်များကို ရောစပ်ရိုက်ကူးထားသည်။
နိုင်ငံတကာမှ Micro Film ရုပ်ရုင်ပွဲတော်
တရုတ်နိုင်ငံတကာ Micro Film ရုပ်ရုင်ပွဲတော်၊ CMFF ကနေဒါ Micro Film ရုပ်ရုင်ပွဲတော်၊ နိုင်ငံတကာလူငယ် Micro Film ရုပ်ရုင်ပြိုင်ပွဲ၊ အာရှနိုင်ငံတကာ Micro Film ရုပ်ရုင်ပွဲတော်၊ မြောက်အမေရိက နိုင်ငံ Micro Film ရုပ်ရုင်ပွဲတော်။
(Micro Film ရုပ်ရုင်ပွဲတော်တစ်ခုချင်းစီ ၏မိတ်ဆက်ချင်းကို နောက်Fileအတွဲတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
Copyright 2020, Monnect Group. All Rights Reserved. Site by Zino Tech.